Antony 10 mba hahazoana ny mari-pahaizana Master Scrum
Benefitsan'ny mari-pahaizana Master Scrum
1. Mitadiava fanazavana fototra momba ny Scrum
2. Hanova ny mombamomba anao
3. Hijanona ho mendrika sy manintona ianao
4. Ny mari-pahaizana Scrum Master dia mahasoa ny fikambanana
5. Ampidiro ny fikambanana anao hanaiky ny fomba fanao amin'ny Agile
6. Miaraha miasa amin'ireo ankizy mitovy taona aminao
7. Asehoy ny fampahalalam-baovao Scrum ho an'ny mitovy taona aminao
8. Miaraha amin'ny manam-pahaizana scrum
9. Mandray tetikasa amin'ny mpiasa mahafeno fepetra
10. Fanehoana fanajana
Fotoana handraisana mari-pahaizana Scrum Master
Ho lasa mpampianatra Scrum
Scrum dia sehatra mahitsy izay manintona ny ekipa, ny fifandirana ary ny hafainganam-pandeha manoloana ireo tetikasa sarotra. Izany dia ahafahan'ireo vondrona samihafa misongadina sy manatsara ny fanatsarana haingana, mifanaraka amin'ny fitsipika mafonja.
Io fomba fampianarana malaza io no ampiasain'ny SME sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny; Ireo fikambanana toy ny Spotify, Microsoft ary Ericsson dia mampiasa Scrum rehetra. Na inona na inona vaovao aminao ny Scrum, na efa manam-pahaizana be izao, dia ireto ny tombontsoa 10 amin'ny fanamarinana Scrum Master:
Mianara lesona matanjaka amin'ny fianarana Scrum
Hanova ny toe-tsainao
Hijanona ho mendrika sy manintona ianao
Ny mari-pahaizana Scrum Master dia mahasoa ny fikambanana
Ampidiro ny fikambanana anao hanaiky ny fomba fanao amin'ny Agile
Miaraha miasa amin'ireo ankizy mitovy taona aminao
Asehoy ny fampahalalam-baovao Scrum ho an'ny mitovy taona aminao
Miaraha amin'ny manam-pahaizana scrum
Mandray tetikasa amin'ny mpiasa mahafeno fepetra
Ny fanadihadiana iray momba ny tetikasa 5,400 IT dia nahita ny drafitry ny fandaniana ny drafitry ny fividianana fividianana matetika ho an'ny 45% eo amin'ny fahazavan'ny asa an-tery. Amin'ny famadihana ho manam-pahaizana manokana an'i Scrum, dia hiala amin'ireo tsy fahampiana ireo ianao ary hampitombo ny tifitra amin'ny famaranana ny tetikasanao amin'ny fomba mahomby sy ara-potoana.
Ny fianarana sy ny mari-pahaizana Scrum dia azo atao, nefa ho an'ny sasany, ny tombony dia tsy mazava avy hatrany. Vakio ny tombotsoan'ny Fanamarinana Scrum Master.
Raha tsy nahavita ny Scrum ianao, ny fanatontosana ny fanamarinana dia hampiseho aminao ireo fahaiza-manao izay mety hampiharina tsara. Noho ny vintana tsy nampoizin'ny fikambanananao tamin'ny fampiharana ny metodôma Scrum ary tsy maintsy manana fahafahana ianao, ny fanatanterahana ny mari-pamantarana Scrum Master dia hanangana ny fototry ny fampahalalana.
Mahomby amin'ny Scrum? Ny fanatanterahana ny fanamarinana Master Scrum dia hameno ny lavaka mety ho azonao amin'ny fampahalalana Scrum. Ny zavatra rehetra dia mihevitra fa tsy maintsy misaintsaina ny ampahany tsirairay amin'ny Scrum ianao mba handalo ny fanadinana ny fanamarinana.
Ny scrum dia fomba fiasa mahery vaika ary ny fampiasana azy io dia tsy maintsy hiditra ao anaty toe-tsaina mihetsiketsika. Ny singa manan-danja indrindra amin'ny fomba fitantanana mahaleo tena sy mahomby dia vondrona misy tebiteby mihetsiketsika.
Ny fiomanana sy ny fanamarinana dia hahatonga ity toe-tsaina ity ho an'ny tenanao sy ireo mpiara-miasa aminao. Amin'ny maha-vondrona anao dia hanana fahafahana hisainana amin'ny lalana mihetsiketsika, miteraka fifanoheran-kevitra tsy dia tsara loatra, fifandraisana tsara kokoa sy tetik'asa mahomby kokoa.
Ny mari-pankasitrahana dia fomba mahavariana hanamboarana ny tenanao amin'ny filoha ary hampiseho amin'ny mpiara-miasa sy ny tale fa azonao tsara ny saha iray.
Ny mari-pamantarana Scrum Master dia hampitombo ny fiantsoana anao amin'ny fikambanana izay mampiasa fomba fanao mahazatra. Ny fanamarinana dia mampiseho koa fa manana toe-tsaina manaitaitra sy fianarana mavitrika maro ianao, mifandraika amin'ny fikambanana na orinasa tsirairay mampiasa ireo fomba fanao ireo.
Ny fanindrahindrana fomba fanao hafa dia safidy goavambe ho an'ny orinasa rehetra satria misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina iray manontolo: olona, ​​processions, clients and management.
Amin'ireny andalana ireny, dia zava-dehibe ho an'ny mpandray anjara rehetra izany, ka afaka manatontosa haingana ny tombontsoa sy ny fiheverana haingana. Miaraka amin'ireo vondron-draharaha tsy dia mendri-kaja sy miverimberina, ireo vondrona mpikarakara ny tenany, Scrum dia tena mahavariana tokoa amin'ity lafiny ity.
Na izany na tsy izany, ny tsy fisian'ny fianarana Scrum dia mety tsy hanome ny vokatra mahafa-po izay hitarihan'ny fitantanana. Raha tsy misy ny fanamarinana ary ny fianarana tena ilaina dia nitombo tamin'ny alàlan'ny paikady momba ny fanamarinana, dia mety tsy hitanao ny varavarankely tena ilaina mba hahazoana Scrum ny tany ao anatin'ny fikambanana.
Ny fitantanana dia hahatsapa tsara kokoa ny fametrahana ny loharanom-pahefana amin'ny scrum raha toa ka misy ny manam-pahaizana mandanjalanja toy ny amin'izao fotoana izao. Ny mari-pankasitrahana Scrum Master dia maneho ny fitantanana fa vonona ny hamantatra ny fomba fanao Scrum.
Ny mari-pamantarana Scrum Master dia hanana vokatra mahasoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa. Ataovy voamarina amin'ny olona izay miara-miasa aminao sy miaraka aminao ianao hamorona sy hanamafy ny voambolana toy izany sy ny fahatakarana fototra amin'ny fitaovana scrum amin'ny orinasanao manokana.
Na inona na inona raha tsy maka tahaka ny fianarana scrum toy ny namanao, na dia eo aza ny zavatra rehetra azonao. Ny mpampianatra Scrum tsirairay dia hanova ny fomba fampianarana azy ary ny zavatra fantatrao dia hiovaova. Mety efa nifantoka tamin'ny faritra maro tao Scrum ianao.
Amin'ny farany dia hanana ny fahafahana mamantatra ny fahalalanao momba ny fahatakarana misimisy kokoa ny Scrum sy ny fomba fiasa henjana.
Ny fanamarinana Scrum Master Certification dia mampiseho amin'ny namanao fa nampanao ny ezaka, noheverina ho Scrum ary nianatra nampihatra izany tao anatin'ny fikambanana.
Tsy misy antony marim-pototra hialana amin'ireo namana izay mandresy lahatra anao izay fantatrao ny zavatrao - manana ny fanamarinana ianao hanehoana azy.
Mankanesa any amin'ny Scrum Master nahazo antoka ary hitambatra amin'ny vondrona manam-pahaizana Scrum fantatra fa mifototra amin'ny fiovana tsy misy fiafarana sy ny fomba fikajiana henjana.
Scrum.org dia manasongadina rafitra iray manerantany momba ny Scrum sy ny mpanazatra Scrum. Ity antokon'olona dinamika ity dia mameno ny tranokalam-baovao, fomba iray hitadiavana fotoana sy toerana hitadiavana (ary manome) fitarihana.
Raha toa ka miady amin'ny tetikasa mandresy ianao, dia misy valisoa lehibe ho an'ny Scrum Masters. Ny mpanjifa mety ho tsapanao dia hahatsapa ny tombantomban'ny vondrona izay afaka miara-miasa sy mampihatra Scrum amin'ny fomba mahery vaika.
Ny mari-pankasitrahana dia tandindon'ny fanajana izay tokony halaina amim-pireharehana. Ankoatra izany, raha sendra eo amin'ny fitantanana ianao, ny fanomanana ny solotenanao sy ny fanamafisanao dia maneho ny fahombiazanao sy ny adidinao amin'ny fianarany. Hahita bebe kokoa amin'ny fianarana ianao raha maniry hampihatra ny fahaiza-manaony vaovao.
Rehefa mandeha ny "maxim", "amin'ny tsy fahafahana mieritreritra ny hanangona olon-kafa, ny fanomanana azy ireo ary ny fialany dia lafo dia maka aotomotra amin'ny fifanarahana azy ireo, manomana azy ireo ary mijanona ho azy ireo."
lasa Professional Scrum Master ao anatin'ny 2-andro fotsiny amin'ny famolavolàna Innovative Technology Solution. Hiomana amin'ny avo roa heny ny haingam-pandeha ary hipetraka ny fanadinana ao anatin'ilay fiomanana - tonga lafatra ho an'ny manampahaizana sy vondrona izay mila Scrum fahaiza-haingana.
amin'ny Andro 2 fotsiny
Tsindrio ny hizara amin'ny Google+ (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Scrum - FITANDREMANA MAFY FREE
Fampitahana eo amin'ny PRINCE2 vs Scrum